काठमाडौं । हरेक कोहीलाई पछिल्लो जन्मका बारेमा जान्नका लागि उत्सुकता बढ्छ । ज्योतिषको भाषामा मनुष्यको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म पनि उसको पुनर्जन्मसम्मका कुरालाई ग्रह तथा नक्षत्रका आधारमा भन्ने गरिन्छ । शास्त्र र पुराणमा लेखे अनुसार मनुष्यले आफ्नो कर्मको फल यही धर्तीमा भोग्नुपर्छ । किनकी, मनुष्यको आत्मा अमर हुन्छ । त्यसैले एक शरीरको नाश हुनसाथ आत्मा अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ । पुराणमा लेखिएको छ कि, मान्छेले आफ्नो कर्मका अनुसार ८४ लाख योनीलाई...
काठमाडौँ । धन सम्पत्ति बिनाको जीवन हामी सोच्न पनि सक्दैनौ । तर हामी प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि धन कमाउन सकिरहेको हुँदैनौँ । चाहे जस्तो सम्पत्ति कमाउन, जागीर खान हामीले गारै हुने गर्छ । हिदू धर्मशास्त्र अनुसार यस्तो समस्याको समाधानका लागि शास्त्रहरुमा उल्लेख छ । यस्ता देबी देवताहरुको व्रत बस्नाले जागीर पाउनका लागि सहज हुनेछ । शनिबार शनी देवको व्रत राख्नु पर्दछ । शनिबार बिहान सबेरै उठेर पहिले एक सफा भाडामा...
काठमाडौं । भनिन्छ, नकारात्मकता र सकारात्मकताको जीवनमा धेरै प्रभाव पर्दछ । यो नयाँ वर्ष २०२१ लाई विशेष बनाउनको लागि यो उपाय अबलम्बन गर्नु होला । जसले नयाँ वर्षसँगै तपाईं भाग्यशाली साबित हुन सक्नुहोस् । तपाईं यो साल सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी चिज घरमा अवश्य गर्नुहोस् । नयाँ वर्ष २०२१ लाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईं धातुले बनेका कछुवा, घोडा, ड्रागन वा फीनिक्स आफ्नो घरमा ल्याएर सफा स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ । यसले...
काठमाडौं । झाडुलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिन्छ । त्यसैले झाडुसँग जोडिएका गुण र अपगुणले हाम्रो जीवनमा ठूलो असर पार्दछ । यदी झाडुसँग जोडिएका केही कुराको ध्यान नराख्यो भने हाम्रो जीवनमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले वास्तुशास्त्रका अनुसार झाडु सम्बन्धी यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्ः १. घर वा अफिसमा झाडुको काम सकियो भने त्यसलाई देखिरहने ठाउँमा नराख्नुहोस् । पुरै समय झाडु देखिरहनु अशुभ मानिन्छ । २. कयौँ पटक झाडु भाँचिदा पनि हामी त्यसको प्रयोग...
काठमाडौं । भक्तजनहरुले मन्दिरमा सवैभन्दा बढी फूल चढाउँछन् । त्यसपछि नरिवलको प्रयोग बढी हुन्छ । नरिवललाई संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ । श्रीफला पनि भनिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फल’। त्यसैले शुभ प्राप्तिका लागि शुभ फल चढाउने प्रचलन शुरु भएको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । वैदिक शास्त्र तथा पुराण तथा महाकाव्यहरुमा मन्दिरमा नरिवल चढाउनुपर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यो फल इन्डोनेशियामा पाइन्थ्यो अनि पहिलो शताब्दी पछिको समयमा उत्तरी एशियातिर...